Landscape Design | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Landscape Design
Ny rhododendron sarotra indrindra amin'ny ririnina
Ny Rhododendrons dia heverina ho zavamaniry tena malaza amin'ny famolavolana ny planeta, toy ny voninkazo mivelatra dia mamadika mora foana ny zaridaina any amin'ny nosy maitso iray. Ny teboka tsara amin'ny fambolena rhododendrona dia karazan'aretina maro be tsy azo lavina io zavamaniry io, izay mora simba ny ririnina.
Tsiambaratelon'ny zaridaina yucca
Ny hazo mainty lava mitatao amin'ny mason-kavoana maitso mavana izay mipoitra avy amin'ny rindrina dia matetika hita ao amin'ny efitrano fatorianay. Io dia zaridaina yucca na lamandy. Be dia be ny mason-tsivana amin'ny fifandraisana tsy mahazatra mihantona eo amin'ny sisin'ny ravina, ary ny felam-boninkazo goavam-be amin'ny endriky ny lakolosy misy lakolosy mavo-fotsy.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao mba hitomboan'ny gelenium
Gelenium dia manana toetra maranitra. Ity zavamaniry ity dia solontenan'ny fianakaviana Compositae ary hita tamin'ny kolontsaina nanomboka tamin'ny 1635. Na izany aza dia nofaritana tao amin'ny asa nataon'i Karl Linnaeus tamin'ny taona 1755 ilay voninkazo. Ny zavamaniry rehetra amin'io karazan-javamaniry io dia mety ho samy hafa tanteraka amin'ny haavony, ary miankina amin'ny karazany, dia miovaova amin'ny 30 hatramin'ny 150 cm.
Karazana sy karazam-borona
Ny fevia mahafinaritra mahazatra dia ampiasaina amin'ny ankapobeny. Mamboly mandritra ny fotoana lava izy io, mitazona firavaka mandra-pahatapitry ny fararano. Ny fikarakarana dia tsy misongadina, tsy mitaky taratra ary afaka mampifaly na dia ny florist amin'ny loko feno aza. Ny olana amin'ny zavamaniry dia tsy misy afa-tsy ny ompiana, izay tsy voavolavola amin'ny fomba fanoratana ny karazany.
Tsidiho ny karazana lolo malaza
Ny Larch dia iray amin'ireo karazam-borona mahazatra indrindra. An'ny fianakavian'ny pine. Ny zavamaniry dia matetika hita any anaty ala, tendrombohitra, faritra zaridaina. Ankoatra izany, dia mety ho ampahany mahafinaritra amin'ny fanorenana ny zaridao. Ity karazana ity dia sarobidy tsy ho an'ny hatsaran-tarehiny, fa koa ho an'ny maharitra, manohitra ny fihanaky ny hazo.
Ny karazan'aretina malaza indrindra
Ny zavamaniry antsoina hoe yarrow dia an'ny fianakaviana compositae (Compositae). Mitombo ao amin'ny faritra avaratry ny morontsiraka andrefana ao amin'ny ilomasina avaratra. Misy karazany zato isan-jatony. Ny ampahafolon'ny karazam-bary natokana ho an'ny tranom-bahiny. Zava-dehibe izany! Noho ny famerenana mavitrika amin'ny famafazana ny tenany, ny akorandriaka marevaka marevaka dia tsara indrindra - ny zavamaniry dia hita ho toy ny tsimparifary, na dia manana fananana medikaly aza izy.
Niroborobo tao amin'ilay tranokala: nipetrapetraka tamin'ny zana-ketsa ary nikarakara tany an-tsaha
Levka dia zavamaniry misy tsiranoka miaraka amin'ny menaka manitra, izay nandravahana zaridaina sy zaridaina nandritra ny taona maro. Ny voninkazo marevaka marevaka dia mitovy amin'ny felan'ny ala. Ny levka dia mety iray, iray na roa, na zavamaniry isan-taona, fantatra fa mihoatra ny roa karazana levkoy. Ny fambolena ny leukova amin'ny alalan'ny zana-ketsa. Noho izany, ny zana-kavina manana elatra havia dia zaridaina na zaridaina fambolena, izay matetika no havaozina, izay fantatry ny ankamaroan'ny mpamboly ho mattiola.
Ahoana ny fomba fanaovana rockeries amin'ny tananao
Tsy ny mpivahiny rehetra no tia mikarakara saha na zaridaina. Misy tompon'ireo faritra ambanivohitra, ary misy maro amin'izy ireo izay tia mandany fotoana malalaka eo amin'ny harenan'ny natiora, fa tsy mamboly azy, fa mankafy ny hatsarana azo ampiasaina. Azon'izy ireo atao ny mamolavola rockeries, izay azo atao amin'ny tànana, amin'ny dacha na ny tontolon'ny firenena.
Ahoana no fomba handraisana ny gabie amin'ny tananao?
Amin'ny famolavolana tetik'asa maoderina dia manomboka mipaka hatrany ny lakandranon'ny trano fatoriana mandritra ny fahavaratra. Amin'izao fotoana izao dia malaza be ny gabio, izay mampiasa ny tontolon'ny designers ho toy ny fananganana, fa koa ho toy ny singa iray izay manana tanjona mahomby. Toa mety tsy ho vita amin'ny tanana ny singa toy ny fanorenana, satria rafitra sarotra izay mitaky ny fahamendrehana sy ny fahaiza-manao.
Manangana loharano iray ao amin'ny firenena amin'ny tanany manokana
Ho an'ny tompona rehetra, ny endriky ny dacha na ny lakana dia tena zava-dehibe. Ny endriny dia azo entina amin'ny manam-pahaizana, saingy, raha azo atao, azonao atao izany. Ny loharano dia famolavolana tsara ny lakandrano na ilay tetika. Azonao atao ihany koa ny manangana amin'ny tananao manokana amin'ny tetikasanao manokana. Ireo loharano loharano Lohatenin'ny fanomezana dia mety misy karazany hafa.
Manamboara renirano amin'ny tananao mba hanome
Ny nofinan'ny tompona trano fonenana na trano iray manokana dia farihy iray misy renirano. Ny famolavolana toy izany dia manova avy hatrany ary mamelon-tena ilay tranonkala, manampy ravina, ary mamelombelona amin'ny andro fahavaratra mafana. Ny riandrom-pamokarana dia mety ho kely ary mety amin'ny faritra voafetra. Mora kokoa ny fanorenana azy raha oharina amin'ny mety: Mba hananganana fanorenana amin'ny tananay manokana dia mila mividy fitaovam-panorenana ianareo ary manaraka ny toro-hevitra omenay.
Famolavolana tontolon'ny ala any an-trano mandritra ny fahavaratra, miaraka amin'ny tanany, ny lokony, ny endriky ny endriny
Ny endrika landscape dia samy zavakanto iray sy dingana mifantoka. Ny tontolon'ny fonenana tsara tarehy dia tena mahafinaritra sy miasa, manamboatra toerana malalaka eny an-tokotany, manatsara ny manodidina ary afaka mampihena ny fandaniana amin'ny fanamainana sy fanalana ny trano. Ny fandaminana ny drafitra dacha, iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny fanatsarana ny tokantrano, dia matetika no tsy raharahiana.
Ahoana ny fomba hananganana vondron'antoko eo amin'ny seha-dacha
Hatramin'izao, maherin'ny dolom-paty isan-karazany ny fiangonan'ny orinasam-panafody efa voaangona, izay ao anaty dacha dia toy ny fampiasana hazo fisaka, sy fofona miavaka amin'ny rivotra madio, ary singa manan-danja amin'ny fananganana ny tontolo iainana. Maro no mikasa ny hanamboatra fitaovana toy izany amin'ny tanan-dry zareo miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana misy.
Ny zava-drehetra momba ny fanatsarana ny fahavokarana tarragona, ny fiomanana sy ny fampiasana azy amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana
Ny hazo: ny fambolena sy ny fikarakarana fanafody
Kitapom-bary kely fa alika Altai Crimson
Favorite florist - zavamaniry ao anaty trano begonia horschavikolistnaya
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Landscape Design